Ciidamada Puntland oo weeraray deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Ammaanka Dowlad Goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa PSF-ta ayaa waxaa ay howlgal culus ka sameeyeen deegaano ka tirsan Gobolka Bari,halkaas oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish.
Howlgallada ayaa Ciidamada waxaa ay sigaar ah uga fuliyeen deegaannada buuraleyda ah ee Gol-cadaabeed iyo Moqor ee Buuraha Cal Miskaat,sida ay sheegeen saraakiisha hoggaamineysay howlgalka.
Saraakiil katirsan Ciidamada PSF-ta ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid lagu baadi goobayey Xubno katirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo ku sugan deegaano katirsan dhulak buuraleyda ah ee gobolka Bari.
Saraakiishu masheegin dad aha hub ay kusoo qabteen howlgalkaas,waxaana xusid mudan in deegaannada hdowr jeer ay weeraro iyo qaraxyo ay ka fuliyeen Al-Shabaab iyo Daacish.